Global Voices teny Malagasy » Hetsik’ireo Makedoniàna Mpampanofa Vatana Mba Hitakiana Ny Tsy Hiheverana izany ho Heloka Bevava, ho Fanefitry ny Herisetra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Febroary 2019 8:10 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fahasalamàna, Fanoherana, Hevitra, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Diaben'ny elo mena tao Skopje, 17 desambra 2018. SAry an'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA. Anisany tao anatin'ireo tahiritsary 186  nampiasàna lisansa Creative Commons.
Ny 17 desambra, ireo mpampanofa vatana, mpanao ‘strip-tease’, ireo mpiasa mpiresaka veta amin'ny telefona sy ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona ao Makedonia dia nikarakara ny andiany faha-iraika ambinifolon'ny “Diabe ho an'ny elo mena” tao Skopje , mba hanamarihana ny Andro Iraisam-pirenena anoherana ny herisetra atao amin'ireo mpampanofa vatana.
Nomarihin'ireo mpampanofa vatana,  ireo mpiaro an-dry zareo, ireo namany, ireo fianakaviany ary ireo mpiaradia aminy tamin'ny 17 Desambra ny Andro Iraisam-pirenena anoherana ny Herisetra Atao Amin'ireo Mpampanofa Vatana.  Sarihan'ity andro ity ny saina ho any amin'ireo heloka bevava miaro fankahalana  zakain'ireo mpampanofa vatana erantany, ary koa ny filàna hanafoanana ny fitsaràna an-tendrony ara-tsosialy  sy ny fanavakavahana izay mandray anjara amin'ny fisian'ny herisetra atao amin'ireo mpampanofa vatana sy ny fanaovana tsinontsinona an'ireo vondrom-piarahamonina misy azy ireo.
Ilay diabe makedoniana dia nokarakarain'ny STAR-STAR – ilay fikambanana voalohany ivondronan'ireo mpampanofa vatana any Balkans , ho fandraisany anjara amin'ny hetsika erantany fanehoana firaisankina miaraka amin'ireo mpampanofa vatana izay miady manohitra ny herisetra sy ny fanavakavahana. Nanambara ireo mpandray anjara fa:
Tao afovoan'ny renivohitr'i Makedonia no nisy ilay diabe. Nitondra saron-tava sy akanjo mampita hafatra ny sasany tamin'ireo mpampanofa vatana nandray anjara, mihiakiaka teny faneva toy ny hoe “Asa ny fampanofàna vatana”. Nanjary tenifototra iraisam-pirenena io fehezanteny io (#SexWorkIsWork ) natosiky ny Sex Workers Outreach Project USA .
Mbola manana dia lavitra, tena lavitr'ezaka ho aleha isika. #IDEVASW  #SexWorkIsWork 
Ny mpitondra tenin'ilay Diaben'ny Elo Mena tao Skopje 2018, izay nitondra saron-tava ihany koa mba tsy hamantarana azy, dia nanazava  fa irian'izy ireo ny hiheverana amin'ny maha-olona ny filàn'ity vondrona natao ankilabao ity.
Vakio ny blaoginay farany ary makà aingam-panahy ao: takian'ireo mpiaro ny zon'ireo mpampanofa vatana ao Makedonia ny hampiasàna ny tena endrik'izy ireo ho ampahany amin'ny fanentanana fandresena lahatra ataony. #SexWorkIsWork @star_sexwork  @sexworkeurope  @SWAN_Network  @tampepeu  https://t.co/s3MyatmHa3 
“Antso ho an'ireo solontenanà andrim-panjakana: ‘Apetrakay aminareo ny fanantenanay.'” takelaka tazonin'ny mpandray anjara iray tamin'ilay “Diaben'ny Elo Mena” teo anoloan'ny Memorial House of Mother Theresa tao Skopje, Makedonia. Sary an'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA. Anisany tao anatin'ireo tahiritsary 186  nampiasàna lisansa Creative Commons.
Nandritra ny diabe, ny Tale Mpanatanteraky ny STAR-STAR, Borče Božinov,dia nitanisa fanadihadiana iray an'ny ONG HOPS  – Tetikasa Misahana ny Fahasalamana ao Skopje, izay nahazoana valinteny avy tamin'ireo 310 mpampanofa vatana. Ny 211 dia nanambara fa niharanà karazana herisetra isankarazany, anisan'izany ny herisetra ara-nofo, ara-batana ary ara-tsaina. Ny 87% tamin'ireo mpampanofa vatana no niharan'ny herisetra avy amin'ireo mpanjifany, ¨ny 43% no niatrika sotasota sy fanambaniana avy tamin'ny mpitandro filaminana ary 28% no niaina fomba fitondra ratsy nataon'ny fianakaviany.
Mety hampihena betsaka ireo herisetra ara-nofo sy ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ny fanaovana ny fampanofàna vatana tsy ho toy ny heloka bevava, araka ny fanadihadiana navoaka tamin'ny Review of Economic Studies tamin'ny taona 2017 sy navoakan'ny The Independent . Hita fa rehefa natao tsy ho toy ny heloka bevava ny fampanofàna vatana tao Rhode Island, nihena 30% ireo herisetra ara-nofo ary maherin'ny 40% ny fihenan'ny fiantraikan'ny aretina angaboribory (gonorrhea) vokatry ny firaisana teo amin'ireo vehivavy.
“Zonay ny hanana fiainana, fiarovana sy fahalalahana haneho hevitra, mitovy laharana amin'ireo olom-pirenena hafa rehetra”, takelaka tazonin'ny mpandray anjara iray tamin'ilay “Diaben'ny Elo Mena” tao Skopje, Makedonia. Sary an'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA. Anisany tao anatin'ireo tahiritsary 186  nampiasàna lisansa Creative Commons.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/28/132327/
 tahiritsary 186: https://www.flickr.com/photos/fosim/albums/72157676779274668/
 mpampanofa vatana,: https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_worker
 ny Andro Iraisam-pirenena anoherana ny Herisetra Atao Amin'ireo Mpampanofa Vatana.: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_to_End_Violence_Against_Sex_Workers
 heloka bevava miaro fankahalana: https://en.wikipedia.org/wiki/Hate_crimes
 fitsaràna an-tendrony ara-tsosialy: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_stigma
 STAR-STAR – ilay fikambanana voalohany ivondronan'ireo mpampanofa vatana any Balkans: http://starsexwork.org/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80-2/?lang=en
 dia nanazava: https://makfax.com.mk/top/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%B4/
 navoakan'ny The Independent: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/prostitution-decriminalise-sexual-violence-sti-transmission-diseases-reduce-study-a8120316.html